Ukumaketha Kwedijithali Nomphumela Wevidiyo | Martech Zone
Ukumaketha Kwedijithali kanye Nemiphumela Yevidiyo
NgoMsombuluko, Februwari 10, 2014 Douglas Karr
Namuhla ekuseni silethe imibiko kwelinye lamakhasimende ethu ebelikade linathi iminyaka embalwa. Banesayithi elihle elikhuphukile kuthrafikhi yokusesha efanelekile cishe ngama-200% ngaphezu konyaka odlule futhi banezinhlobo ezahlukahlukene ze-infographics namaphepha amhlophe ukuheha abathengi ukuthi babhalise futhi baqale ukubheka isisombululo sabo. Ukuphela kwento esikuthola ilahlekile kusayithi labo okuqukethwe kwevidiyo. Siyazi, okokuqala, ukuthi ividiyo kufanele manje kunoma iyiphi inkampani efisa ukuncintisana ku-inthanethi.
Lokhu i-infographic evela kwabachazi bevidiyo upenda isithombe esichazayo maqondana nomthelela wevidiyo ekumaketheni kwakho konke kwedijithali. Izibalo ziyamangaza:
Ama-63% abaphathi abaphezulu bavakashele indawo yabathengisi ngemuva kokubuka ividiyo.
Amavidiyo kumasayithi okuthengisa kugcinelwe izivakashi isilinganiso semizuzu emi-2 ubude, ziguqulwe ezingama-30% ngaphezulu futhi zenyusa ukuthengiswa kwamathikithi okujwayelekile ngo-13%.
Ama-68% wabathengisi abaphezulu manje sebenzisa ividiyo njengengxenye yecebo labo lokumaketha ledijithali.
Ividiyo elungiselelwe yandisa amathuba okuthi umkhiqizo wakho ubekhona ikhasi lokuqala le-Google imiphumela yenjini yokusesha izikhathi ezingama-53!
Amakhasimende angama-85% maningi amathuba okuthi athenge ngemuva kokubuka ividiyo yomkhiqizo.
Tags: ukudayiswa kwe-digitalividiyo ye-ecommerceividiyo echazayoamavidiyo achazayouyachazaAmavidiyo Wokumakethaividiyo yomkhiqizoividiyo yokuthengisaizinga lokuguqulwa kwevidiyoividiyo seo
Nquma Kakade: Capture and Rank Feedback
Mar 30, 2017 ku-10: 56 AM
Isizathu esiyinhloko salokhu kuqhuma kwesidingo kungenxa yobuchwepheshe bethu obukhula njalo. Wonke umuntu unama-Smartphones lapho angabuka khona amavidiyo lapho usohambeni. Futhi njengoba zikholisa ngempela ngenxa yobuhle nezinye izinto, abantu bavame ukuthenga okuningi ngemuva kokubuka amavidiyo. I-athikili enhle ngendlela, noma ngabe indala.